စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ, IBCsအဆိုပါကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်မှာကော်ပိုရိတ်ဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း 143 Revised Edition ကို၏ဥပဒေများ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအခန်း 2009 ။ စိန့်ဗင်းဆင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (ဥပမာဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအေးဂျင့်မှတဆင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အေးဂျင့်ဒေသခံပညတ်တော်အတိုင်းလိုက်နာထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုပွငျဆငျနှင့်အတူသူတို့ကို file ပါလိမ့်မယ် မှတ်ပုံတင်ရုံး.
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေပြဌာန်းလျှို့ဝှက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ထိန်းသိမ်းရေး (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး) အက်ဥပဒေ 1996 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးတင်းကျပ်လျှို့ဝှက်ဥပဒေများတစ်ဦးဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဤပညတ်တရားကိုကော်ပိုရိတ်သတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂလိကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း, ယင်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းသူတို့နှင့်အတူပါဝင်သူတို့အဘို့တင်းကြပ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအာမခံ။ ဤသည်အက်ဥပဒေကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး privacy ကိုဥပဒေများကိုတဦးဖြစ်စဉ်းစားသည်။
လူအတော်များများဟာရရှိရန်ဤတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာကော်ပိုရေးရှင်းကို set up ချင် စိန့်ဗင်းဆင့် Forex လိုင်စင် ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးကိုင်ထားရန် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်။ အချို့လူများကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းပိုင်းရန်ပုံငွေများကိုင်ထား၏ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုအကျိုးခံစားခွင့်၏အားသာချက်ယူပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းတညျးဟူသောအန်တီကျွန်းကျွန်းစုရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်တွေ့ဆုံရှိရာကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤသည်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူကြိုက်များသောရိုးရှင်းစွာစိန့် "အဖြစ်လူသိများသည် ဗင်းဆင့်။ "
စိန့်ဗင်းဆင့်ရဲ့မြေဧရိယာ၏အဓိကကျွန်းစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနေးဒါကျွန်းမှဆန့်သောဂရီနီဒိုင်းအဖြစ်လူသိများသေးငယ်ကျွန်းများ၏ကွင်းဆက်ပါဝင်သည်ဟု 150 စတုရန်းမိုင် (390 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ စိန့်ဗင်းဆင့်၏မြောက်ပိုင်းဘာဘေးဒိုးစ၏အရှေ့ဖြစ်သောစိန့်လူစီယာဖြစ်ပါတယ်။ စိန့်ဗင်းဆင့် populating ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 100,000 မြို့သားတို့ရှိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမအခွန်: စိန့်ဗင်းဆင့်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်သည့် နေ့မှစ. 25 နှစ်ပေါင်းအခွန်, ကော်ပိုရိတ်အခွန်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အခွန်ကိုသိုထားသော, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အခြားသူများအခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေထုတ်ဖေါ်ရမယ်ရသောနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများ၏။
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: စိန့်ဗင်းဆင့်က၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာထည့်သွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုပေးထားပါတယ်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လှုပ်ရှားမှုများသတင်းအချက်အလက်တစ်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနအာဏာပိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်သို့လွန်မည်မဟုတ်ပါ။
အလွန်သေးငယ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းခ: စိန့်ဗင်းဆင့်တကမ္ဘာလုံးနိမ့်ဆုံးဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့်နှစ်စဉ်ကြေးအခြို့ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသာ $ 125 အမေရိကန်ဒေါ်လာမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးပေါင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးစရိတ်အဘို့။
တင်းကျပ်သောလျှို့ဝှက်: စိန့်ဗင်းဆင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလျှို့ဝှက်ဥပဒေများ၏အဲ့ဒီ့ set ကိုတစ်ဦးရှိပါတယ်။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချွေကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: အများစုမှာသစ်ကိုကော်ပိုရေးရှင်း2ရက်5ထံမှမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး: စိန့်ဗင်းဆင့်အတွက်စံငွေကြေးအမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်လွယ်ကူသောအောင်, အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်မှာတော့အားလုံးအဓိကနိုင်ငံခြားငွေကြေးခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးစိန့်ဗင်းဆင့်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့လိုအပ်သည်။ ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များဒေသခံများဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းနှစ်ဦးစလုံးရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: ကော်ပိုရေးရှင်းဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာအမည်မသိပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် privacy အဘို့စိန့်ဗင်းဆင့်အတွက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
အဘယ်သူမျှမစာရင်းကိုင်: စိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်, ထိန်းသိမ်းရန်တင်ပြရန်, သို့မဟုတ်အခွန်သို့မဟုတ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မည်သည့်ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းမလိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။
အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ခေါင်းအခွန်: စိန့်ဗင်းဆင့်မှတ်ပုံတင်သည့် နေ့မှစ. 25 နှစ်ပေါင်းမဆိုဝေစုသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအပေါ်တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်ကနေသူ့ရဲ့ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
တစ်ဦးကစိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာလည်းစိန့်ဗင်းဆင့်အတွက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများလည်းရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအတွက်နေထိုင်သူများရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကစိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ ဒါရိုက်တာဒေသခံများဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်လမ်းညွှန်မှုများခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းတခုကော်ပိုရေးရှင်းအတွင်းရေးမှူးကိုငှားရမ်းရန်မလိုပါ။
စိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်သည့် နေ့မှစ. 25 နှစ်ပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အခွန်, ကော်ပိုရိတ်အခွန်သို့မဟုတ်အခွန်ကိုသိုထားသော, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ဝင်ငွေအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရရှိနိုငျသညျ။
အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ '' ပြည်တွင်းဥပဒအခွန်ငွေပေးချေမှုအထောက်အထားလိုအပ်ပါတယ်လျှင်အားလုံးအမြတ်အစွန်းပေါ်မှာတစ်ရာခိုင်နှုန်းငွေပေးချေမှုတင်ပြရန်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်။
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းတိုးကြေးသာ $ 125 အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်းဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
1996 ၏လျှို့ဝှက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ထိန်းသိမ်းရေး (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး) အက်ဥပဒေကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့အတင်းကျပ်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy သေချာ။ ဤသည်အက်ဥပဒေကမ္ဘာပေါ်မှာကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး privacy ကိုဥပဒေများကိုများထဲမှစဉ်းစားသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်အခြားနိုင်ငံအကြားမျှအခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးအဖြစ်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ပို. ပင် privacy ကိုသေချာ, ရှိပါတယ်။
စိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်စာရင်းစစ်အလေ့အထများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မလိုအပ်ပါ။ ကော်ပိုရေးရှင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်, ဒါမှမဟုတ်အခွန်သို့မဟုတ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်အဘို့မဆိုမှတ်တမ်းများတင်ပြရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
ဒါဟာ2ရက်5အကြောင်းကိုယူစိန့်ဗင်းဆင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအဘို့ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ် name ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ turnaround ပေါ်တွင်မူတည်သည်အဖြစ်။
တစ်စိန့်ဗင်းဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်: အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လျှို့ဝှက်, အသေးစားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသော, တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်လိုအပ်သော, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်နှင့်ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်။